Arrimaha Macaamilada qaarkood ee ku yaala Webka Sawirada Khabiir Ciraaq
Sannadihii ugu danbeeyay, kooxda taageerada XBMC waxay ogaadeen in daacad u ah macaamiishu waxay isticmaalaan habka lagu abaabulo warbaahinta iyo macluumaadka macluumaadka si toos ah. Si aad u noqoto mid daacad ah, XBMC wax dhibaato ah kuma laha barnaamijyada aad isticmaashay si aad u haysato macluumaadkaaga iyo xogta filinkaaga. Macluumaadkaaga, awoodda aad u-habayn karto macluumaadka macluumaadka filimada si toos ah waa xajmiga ugu wayn ee XMBC ee warshadaha suuq-geynta.
Kuwa bilowga ah, shabakadda shabakada waa qora is-qori ah oo soo jiidanaya xogta ku saabsan warbaahintaada iyo fiidiyowga aad doorbidayso boggaga ay jecel yihiin iyo kuwa muhiimka ah, ka dibna soo diraya Macluumaadka XBMC. Kuwa isticmaala daacadnimada ah ee aan weli ogayn, XBMC waxay ka kooban tahay xayeysiis boggaan oo dhajis ah oo soo ururiya macluumaadka metadata iyo daboolida daboolida baahidaada.
Si joogto ah, XBMC waxay dib u cusbooneysiisaa oo cusbooneysiisaa xayeysiisyada bogagga aan ku jirin si ay ugu adeegaan macaamiisha daacad u ah ugu badnaan - schnell umziehen wohnungssuche. Haddii baahida loo baahdo, XBMC waxay sidoo kale ku dartay sifooyin cusub si ay uga caawiso filimaanta xiisaha filimada inay muujiyaan farshaxanka fanaanka oo si dhakhso ah u daboolaan. Si aad u cusbooneysiiso bogga interneetka ee bogga internetka ah iyo xogtaada, waxaad tagtaa 'Options Content' oo aad ogolaato shuruudaha cusub iyo shuruudaha.
Sida loo dhoofiyo maktabadda filinkaaga faylasha nuqulada
Tirada wanaagsan ee isticmaalayaasha daacadda ah ayaa isticmaalaya maamulayaasha nuuca si ay u abaabulaan doorashooyinka warbaahinta. Ma waxaad ka shaqeyneysaa dhisidda nuqul ka mid ah sawirkaaga iyo tafaasiisha metadata? XBMC waxay si buuxda u taageertaa ikhtiyaarkan.
Si aad ugu dhoofiso maktabadaha aad jeceshahay faylasha nfo, waxaad ku dhejisaa '' Video Video Library '' hoos yimaada 'Sawirada Goobaha'. Daabacaadda macluumaadka badan ama mid kaliya, metadata, iyo sawiradaada. Tani waxay kaa caawineysaa inaad abuurto nfos maktabadahaaga.
Ku biirida macluumaadka XBMC
XBMC waxay ka kooban tahay bulsho ku salaysan internetka oo ku daraya kartida iyo Macluumaadka XBMC wuxuu ka shaqeeyaa ku dhiirigelinta dadka isticmaala inay ku darsadaan filimka ay jecelyihiin filimadooda, sawirada, iyo bandhigyada maalinlaha.Xogta XBMC waxay ka kooban tahay maqaalo badan oo badan iyo sharraxaad, oo ay ugu mahadcelinayaan macaamiisha daacad ah.
XBMC waxay ka kooban tahay shaqaale taageera internetka oo isticmaala internetka oo bixiya adeegyo la-talin oo loogu talagalay bar-barbaariyayaasha iyo dadka isticmaala dhamaadka, Si kastaba ha noqotee, waxaad ku caawin kartaa inaad ilaaliso boggaga internetka ee XBMC haddii aad haysato
Waxaad sidoo kale kaa caawin kartaa inaad saxdo dhibaatadaada adoo isticmaalaya tababbarrada on XBMC Wiki iyo tifaftiraha wargeyska bogga. Isticmaalayaasha khibrada leh, adoo isticmaalaya bog furan si ay u abuuraan shaashooyin cajiib ah waa hawl fudud oo lagu fulinayo. Si kastaba ha noqotee, waayo-aragnimadu waxay noqon kartaa waxoogaa wicitaan ah oo bilawga ah. Ku darso khibradaada iyo tabobarradaada si aad u badbaadisid bilawgaaga iyagoo la kulmaya asxaabtooda.
Sawirada shabakada waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa ka caawinta bloggers iyo xiisaha filinka inay la kulmaan maktabadaha ay rabaan. Duufaantu waxay u oggolaanayaan inay dhiirigeliyaan inay isku wareejiyaan warbaahinta iyo maktabadaha filimada iyagoo aan la kulmin caqabado. Ha u ogolaan maareynta xogta inay hoos u dhigto mashruucaaga internetka. Waxaad isticmaali kartaa waraaqaha bogagga si aad u hesho xogta ku haboon baahidaada macaamiisha iyo tafaasiishaada. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa qaababka awoodda ugu badan ee XBMC si loo abaabulo loona maamulo xogtaada barnaamijyada.